Kedu ihe na-eme na saịtị gị ugbu a? | Martech Zone
Monday, August 15, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Imirikiti ndị ahịa anyị na-enyocha ha nchịkọta kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu. Oge ụfọdụ, ihe a rụpụtara na-eju ha anya. Ikekwe ọ bụ aha na blọọgụ ọzọ, mbipụta ma ọ bụ saịtị ntinye aka mmekọrịta. Nsogbu bụ na ha anaghị ahụ ya ugbu aHa na-ahụ ya awa 8 ruo 24 mgbe ihe omume gasịrị.
Otutu ire ahia bu banyere oge na ngwa ngwa. Echi anaghị egbu oge iji gbalịa ime ka okporo ụzọ dị ogologo. Site na oge ị na-ahụ ya na nchịkọta nchịkọta gị, ọ gafeela. Ozugbo nchịkọta bụ isi ihe na atụmatụ a. Itinye ego na ezigbo oge nchịkọta ngwaahịa dị ka Mee ka ume dị ọhụrụ (Abụ m onye ọrụ ntọala nke Reinvigorate - onye ahịa anyị zụtara n'oge na-adịbeghị anya) Webtrends) nwere ike inye gị ozi ịchọrọ.
Ọnụ ego nke ngwa dị ka nke a bụ ọnụ .. malite na $ 10 kwa ọnwa. Nke ahụ bụ obere ọnụahịa enyere ụfọdụ atụmatụ. Ikike ịhụ ọtụtụ mmadụ na-eleta saịtị gị kwa awa, okpomoku nke ihe ha na-eme, nyochaa ọrụ ha na saịtị ahụ, ọbụlagodi ịhụ ọrụ ndị ọbịa akpọrọ na saịtị ahụ.
Chọpụta ọrụ na saịtị gị nke ọma nwere ike inye gị ozi ịchọrọ ịme ozugbo mgbanwe, gbatịkwuo spikes na data site na ime ozigbo nkwalite ndị ọzọ, gbanwee ọdịnaya nke anaghị arụ ọrụ n'ime awa ole na ole na-ebipụta ya… ndepụta na-aga n'ihu.
michele ka osi
Daalụ maka ịkpọtụrụ Doug. Anyị na-a bit giddy banyere ya. Akpado na na blọọgụ anyị na nso nso a ma ọ dị jụụ. Enweghị ike ichere ịhụ ya maka mkpọsa ọhụụ na-amalite oge ọzọ! Nwee ọmarịcha ụbọchị.
Ọ bụ nnukwu ikpo okwu ma jupụta ntakịrị ntakịrị oghere na ngwaahịa nke ngwaahịa Webtrends nwere ugbu a. Ndi be anyi di itunanya!